ဒီနောက်ပိုင်း Android ဖုန်းတွေ အသုံးများလာတော့ မိမိရဲ့ Website, Blog တွေကို Android App အဖြစ်ဖန်တီးပြုလုပ်ပြီးတော့ တင်ပေးကြပါတယ်။ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို အမြဲလာဖြစ်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အဲဒီကိုယ် လုပ်ပေးထားတဲ့ Apk လေးကို Install လုပ်ပြီး အင်တာနက်သုံးပြီး တစ်ခါဖွင့်ထားလိုက်တာနဲ့ နောက်တစ်ခါကို Off line ကနေဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို သပ်သပ်လာစရာမလိုတော့ပဲ ကိုယ်အမြဲသုံးနေတဲ့ ဖုန်းကနေ အလွယ်တကူ ဖတ်လို့ရတာပေါ့။အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့် Blog လေးကို အမြဲ လာလည်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် Android App လေးတစ်ခုလုပ်ပေးရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားမိတာနဲ့ Website, Blog များကို Apk လုပ်နည်း ဆိုတဲ့ EBook လေး တွေ့တာနဲ့ သချာဖတ်ပြီး လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
Posted by အောင်စိုးထွန်း at 7:48 AM No comments:
Posted by အောင်စိုးထွန်း at 9:55 AM No comments:
Posted by အောင်စိုးထွန်း at 7:22 AM No comments:
Posted by အောင်စိုးထွန်း at 10:43 PM No comments:
Win7Ultimate May 2013 x 64 bit (နောက်ဆုံထွက် update vers
Win7Ultimate May 2013 x 64 bit (နောက်ဆုံထွက် update vers ဒါကတော့ Win7Ultimate အတွက် 64 bit ပါတဲ့ iso ဖိုင်ပါ။. လိုချင်တဲ့သူများ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ 200MB စီ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒီဖိုင်တွေကို win rar နဲ့ ဖိုင်ပြန်ဖြေရမှာပါ။ လုပ်နည်း ရေးပေး ထားပြီးသားပါ။ ဖိုင်ဖြေနည်းကို ရေးပေးထား ပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ လည်း ရေးပေးပါဦးမယ်။ Download လုပ်မည့်သူများ သိစေချင်တာ တစ်ခု ပြောပြပါဦးမယ် File တွေကို Download လုပ်တဲ့ နေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ Download with IDM ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Download လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် auto download link ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ကဲအားလုံးပဲ အောက်မှာ Direct Link ကနေ နေ Direct နှိပ်ပြီးတော့ Download လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။ Link မသေတော့အောင် Google Drive ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်။ Download From Google Drive Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | Part12 | Part13 | Part14 | Part15 | Part16 | Part17 | Part18 | Part19
Posted by အောင်စိုးထွန်း at 10:36 PM No comments:
ဒီGuitar Pro လေးထဲမှာ ဂီတာ လက်ကွက်ပေါင်း တစ်သန်းကျော်ပါပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရှိရှိသမျှ လက်ကွက် အကုန်လုံးပါပါတယ်။ ဂစ်တာ အတီး တတ်ချင်သူများ။ လက်ကွက် မသိသူများနှင့် တစ်ခြား ဂစ်တာဝါသနာ ရှင်များ အားလုံး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ လက်ကိုင်ပုံ ကိုင်နည်းလဲ ပါပါတယ် ။ ဂီတာ တင်မကဘူး၊ Keyboard လည်းလေ့ကျင့်လို့ရသေးတယ်။ လိုချင်သူများ အောက်မှာပေးထားတဲ့ download link မှာယူလို့ရပါတယ်။ >>>Download<<< ဒီမှာ ဆိုတာ ကို နှိပ်ပြီးဝင်ရောက်ဒေါင်းယူနိူင်ပါသည်.. Download.... ကော့ပရံသားလေး
Posted by အောင်စိုးထွန်း at 2:04 AM No comments:
Android 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများအားလုံးကို မြန်မာစာအဆင်ပြေမှန်စွာ သွင်းပေးနိုင်မည့် Myanmar Mobile Zawgyi Changer2v1.0.5
Posted by အောင်စိုးထွန်း at 12:28 AM No comments:
ဒီကောင်လေးကတော့ နှစ်တစ်ရာပြက္ခ ဒိန်လေးဖြစ်ပါတယ်. ကျနော့်မိတ်ဆွေတယောက်တောင်း ထား လို့တခြားသော ဘလော့ မိတ်ဆွေများလည်း မိမိတို့ ကွန်ပျူ...
ဂစ်တာလက်ကွက်မသိသူများ အတွက် လက်ကွက်ပေါင်း တစ်သန်းကျော်ပါတဲ့ BILLION CHORDS
ဂစ်တာ Crazy များအတွက်ပ...
ဒီGuitar Pro လေးထဲမှာ ဂီတာ လက်ကွက်ပေါင်း တစ်သန်းကျော်ပါပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရှိရှိသမျှ လက်ကွက် အကုန်လုံးပါပါတယ်။ ဂစ်တာ အတီး တတ်ချင်သူများ။ လက်ကွက...
www.people.com.mm (မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်လေးနော်) www.khitluneg.org.mm (ရွှေဈေး၊ဒေါ်လာဈေးတွေနဲ့ သတင်းစုံတွေ) www.alpha.com.mm (ZawGyi F...
အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရား၏ ဗုဒ္ဓဝင် အကျဉ်း
ကျနော့်ဘလော့ကို လာရောက်လေ့လာကြတဲ့ လူမျိုးဘာသာမျိုးစုံများထဲမှ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင် သူတော်စဉ်များ လေ့လာမှတ်သား ကုသိုလ်ပွါးစေရန်ရည...
Windows XP Clean Installation Computer အသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေနဲ့ တစ်နေ့နေ့၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမှာက Computer ပျက်စီးမှုပဲ...
“aungsansukyi.youth@gmail.com add လာပါက လုံးဝလက်မခံပါနဲ့
“aungsansukyi.youth@gmail.com add လာပါက လုံးဝလက်မခံပါနဲ့။ မိမိတို့ အကောင့်များ ပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်။ ခင်ညွန့် အပိုင်း ၃ ဆိုပြီး zip ဖိုင...
ဗွီဒီယို တည်းဖြတ် နည်းပညာ စာအုပ်
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ဗွီဒီယို တည်းဖြတ်လုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်းစားတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပညာပေး စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသာ...
Android ဖုန်းတွေကို မြန်မာစာ နဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်သွင်းချင်သူတွေအတွက် ဖုန်းထဲမှာတင်လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မာစာထည့်သွင်းနိုင်မယ့် Myanma...
ကျွန်တော်တို့ အခုနောက်ပိုင်း Windwos 8 Preview Version ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း အများစု Windows 8 ကို စမ်းပြီး အသုံးပြုလာတာ တွေ့ရပါ...
Adoble Photoshop 7.0
၀င်းဒိုး(စ်) တင်နည်း (1)
1GB မှ 2GB ပြောင်းနည်း (1)
Adoble Photoshop 7.0 (1)
Internet Speeder 4.5 (1)
Nokia and Sony (4)
Uninstaller Tools (3)
USB နဲ့ဝင်ဒိုးတင်နည်း (3)
Window တင်နည်း (3)
Window 8 (5)
Windows Xp SP3 Veleno OS (2)
ဂစ်တာ Crazy (1)
ဂီတကို ၀ါသနာပါသူများအတွက် (1)
ဖုန်းထဲကို၂၀၁၂ မြန်မာပြက္ခဒိန် ထည့်နည်း (1)
ဘာသာစကား (၂၄)မျိုး (1)
မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန် (1)
အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရား၏ ဗုဒ္ဓဝင် အကျဉ်း (1)
အသုံးဝင်သော ၀က်ဆိုဒ်များ (1)